Fitaovana fampakaram-bady: Vector Pack maimaim-poana sy tsy misy fangarony | Famoronana an-tserasera
Fitaovana fampakaram-bady: fonosana Vector maimaim-poana sy tsy manam-paharoa
Ao amin'ny fanasana, afisy, rakikira na fampahatsiahivana ny fankalazana ny fampakaram-bady dia zava-dehibe ny fananana singa misy sary na kojakoja mifanaraka amin'ny asa rehetra tsy maintsy arosontsika. Indrindra raha hikarakara singa samihafa isika (ohatra ny famolavolana sy ny fanasana album) dia ampirisihina mafy isika hiezaka miasa manerantany fametrahana fifandraisana eo amin'ireo tolo-kevitra samy hafa ary marihina amin'ny fomba sasany fa izy ireo dia ao anatin'ny fianakavian'ny vokatra iray ihany, izay samy maneho ny daty mitovy, ny mpanjifa mitovy ary ny fankalazana iray ihany. Ireo singa voninkazo toa ny zana-kazo na headboard dia mazàna no raisina tsara ary manome ny hakantony amin'ny fomba minimalist tanteraka, izay tena mahaliana satria manome antsika valiny mahazatra sy minimalist miaraka amin'izay ary mankafy foana ny toerana malalaka misy ny zavaboarintsika. afaka miaina sy manome hery mitaona ny fahitana mahomby. Androany aho te-hanolotra a fifantenana ireo singa izay miompana amin'io karazana fiasa io.
Avy amin'ny tranokalan'ny Freepik Nahazo fonosana vondrona vektor fito mahaliana sy mahasoa indrindra amin'ity karazana tetikasa ity izahay. Azonao atao ny mahita ireo andiana singa tsy andoavam-bola tanteraka amin'ny mpizara 4shared (manokana kokoa avy amin'ny ity adiresy ity). Manantena aho fa nankafizinao izany ary mazava ho azy raha manana olana ianao amin'ny fisintomana ny atiny na karazana fisalasalana… avelao izahay haneho hevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Fitaovana fampakaram-bady: fonosana Vector maimaim-poana sy tsy manam-paharoa
Misaotra betsaka! ;)
Valiny tamin'i Roy
Tongasoa ianao Roy! :)
Kitapo loharano $ 15.000 ... amin'ny $ 79 fotsiny!